Chelsea oo Lasoo Wareegtay Goolhayahii Hore ee Qaranka England Rob Green - Wargane News
Home Sports Chelsea oo Lasoo Wareegtay Goolhayahii Hore ee Qaranka England Rob Green
Goolhayaha Rob Green ayaa dhameystiray ku biirada Chelsea qaab xora .38 jirkaan ayaa noqday saxiixii u dambeeyay ee safka Blues kamid noqda, wuxuuna ku tartami doonaa dooqada seddexaad ee goolka.
Green ayaa ahaa mid ay iska fasaxday naadiga Huddersfield dhamaadka xili cayaareedkii hore isagoo heshiis waqti koobana la galay kooxda Stamford Bridge balse Chelsea ayaa dooneysa inay adkeeyso heshiishkooda.
Waxa uu u sheegay website-ka kooxda: “Waxa ay aheyd 24 saacadood. Waxaad ka fekereysaa xirfaddaada iyo meesha aad rabto inaad tagto ka dibna waxaad heleysaa taleefan sidan oo kale ah, waana wada hadal gaaban.
Waxay ahayd waqti aad u wanaagsan aniga ahaan mana sugi karo inaan bilaabo. Aad ayaan u faraxsanahay, waxaana farxad iyo ixtiraam ah inaan halkaan joogo.
Green ayaa leh qibrad badan, isagoo ka cayaaray horyaalka Premier League iyo Horyaalka heerka labaad ee Championship 658 kulan.
Willy Caballero ayaa kaalinta labaad ee dhanka goolka ah iyadoo Chelsea ay tartan galin doonto goolka kowaad waa haddii ay Thibaut Courtois ka iibiyaan Real Madrid.